Sii hayaha wasiirka shaqada oo kormeeray sida shacabka Bakool uga faa’iidaysanayaan barnaamijak Baxnaano | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Sii hayaha wasiirka shaqada oo kormeeray sida shacabka Bakool uga faa’iidaysanayaan barnaamijak Baxnaano
Sii hayaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukumadda federalka Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa maanta kormeer ku tagaya degmada Xudur ee Gobolka Bakool isagoo u kuurgalaya sida halkaasi uu uga socdo barnaamijka Baxnaano.
Sii ahayaha wasiirka shaqada dowladda Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa sheegay in 20,700 oo ka mid ah danyarta gobolka oo ku nool Xudur iyo deegaanada hoos yimaada ay ka faa’iidaysan doonaan barnaamijkan oo lagu horumarinayo hab nololeedkooda.
“Waxaan maanta booqasho hal maalin ah ku tagey degmada Xudur, kaasi oo ahaa socdaal la xiriirtay u kuur-galidda iyo qiimeynta barnaamijka Baxnaano, waxaan guryahooda ugu tagney qoysaska ku nool deegaanada ku dhow magaalo madaxda gobolka Bakool, ee kala ah Weerow iyo Tubooy” ayuu yiri wasiir Sadiiq.
Sii hayaha wasiirka shaqada ayaa sidoo kale ayaa maamulka degmada Xudur uga mahadceliyay sida ay u maamuleen mashruuca oo ah in sidii loogu talagalay loo gaarsiiyo dadkii mudnaa.
“Barnaamijka Baxnaano natiijada laga doonayo waa in qoysaska nugul uu u horseedo kor u kac nololeed, taas oo maanta ay qireen qoysaskii aan booqanay. sidoo kale waxaan warbixin ka dhageystay mas’uuliyiinta degmada, kuwa gobolka iyo qaybaha bulshada” ayuu yiri sii hayaha wasiirka shaqada Mudane Sadiiq Xiri warfaa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 18-dii bishii April ee sanaadkan daahfuray barnaamijka Baxnaano oo taakuleyn dhaqaale lagu siinayo qoysaska danyarta ah.
Barnaamijkan oo ah wajiga 1-aad, waxaa lagu caawinayey 200,000 oo ah qoysas sabool ah (qiyaastiina ah 1.3 milyan oo qof) oo haysto carruur da’doodu ka hoosayso shan sano ee guud ahaan dalka Soomaaliya.
Sii hayaha wasiirka shaqada oo kormeeray sida shacabka Bakool uga faa’iidaysanayaan barnaamijak Baxnaano was last modified: September 21st, 2020 by Admin